के हो मेनिन्जाइटिस् ?
डा. गोपालरमण शर्मा, बरिष्ठ न्यूरोसर्जन, वीर अस्पताल
२०७३ पौष ३ आइतबार १९:२५:५६ प्रकाशित
मेनिन्जाइटिस् विशेष गरी चार प्रकारका हुन्छन् । सवैभन्दा बढी देखिने व्याक्टेरियाबाट हुने खालको मेनिन्जाइटिस रोग एक प्रकारको संक्रमणबाट लाग्छ । मानिसको टाउको भित्र मस्तिष्क छोप्ने एक खालको पर्दा हुन्छ, जसलाई मेनेन्जेज भनिन्छ । यही मेनेन्जेजमा हुने संक्रमणलाई मेनिन्जाइटिस् भनिन्छ । मेनिन्जाइटिस् विशेष गरी चार प्रकारका हुन्छन् । सवैभन्दा बढी देखिने व्याक्टेरियाबाट हुने खालको मेनिन्जाइटिस् हो । यो व्याक्टेरिया मेनिन्जाइटिस् पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पायोजेनिक र अर्को ट्युवरकुलस ।
तर मेनेन्जाइटिस् धेरै कारणले हुन्छ । भाइरल, केमिकल, फङ्गस र प्यारासायिटिकका कारण मेनिन्जाइटिस् हुन्छ । यस्ता किटाणुहरु वातावरण प्रदूषण, रगत, पिनास वा कानको संक्रमणले मेनेन्जेजमा पुग्छन् र मेनिन्जाइटिस् हुन्छ । तर, कहिलेकाहिँ क्यान्सरका कारण पनि मेनिन्जाइटिस् हुनसक्छ । मेनिनजाइटिसको मुख्य लक्षण अचानक धेरै टाउको दुख्नु तथा टाउको दुखेर बान्ता हुनु हो । कसैकसैलाई ज्वरो आउने, गर्धन दुख्ने, गर्धन दुखेर घाँटी दह्रो हुने पनि हुन्छ । यी त शुरुको अवस्थामा देखिने लक्षण मात्र हुन् ।
यसको समयमै उपचार भएन भने बिरामी बेहोस हुने, छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्ने, प्यारालाइसिस् हुने, आँखा दुख्ने, कान नसुन्ने र अपाङ्ग हुने पनि हुनसक्छ । मेनिन्जाइटिस् भनेको अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो । मेनिन्जाइटिस् भएपछिको मृत्यु दर ३० प्रतिशत जति हुन्छ । र बाँचेकामध्ये पनि करीब २० प्रतिशतमा अपाङ्गता हुने सम्भावना हुन्छ । मेनिन्जाइटिस् धेरै प्रकारका व्याक्टेरियाले हुन्छ । तर गाउँघरका मानिसलाई प्रायः न्यूमोकोकस मेनिन्जाइटिस् भन्ने किटाणुबाट मेनिन्जाइटिस् हुन्छ । यसबाट बँच्न भ्याक्सिन पनि पाइन्छ ।
तर, यसबाहेक अन्य मेनिन्जाइटिस्को भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सकेको छैन । लक्षणका आधारमा मेनिन्जाइटिस्को शंका लागेमा सर्वप्रथम बिरामीको सिटीस्क्यान गरेर हेरिन्छ । मस्तिष्क भित्र मेनिन्जाइटिस्का जस्तै लक्षण अन्य समस्यामा पनि देखिने हुन्छ । जस्तै ब्रेन हेमरेज वा ब्रेन ट्यूमर भएमा पनि मेनिन्जाइटिस् जस्तै लक्षण देखिन्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला बिरामीको सिटीस्क्यान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसबाट पनि रोग पत्ता लगाउन सकिएन भने ढाडबाट पानी निकालेर परीक्षण गरिन्छ । हाम्रो स्पाइनल कर्ड मस्तिष्कबाट शुरु भई मेरुदण्डको तल्लो भागसम्म पुगेको हुन्छ ।
यसरी मस्तिष्कको सम्बन्ध मेरुदण्डको तल्लो भागसम्म पुगेको हुन्छ र मस्तिष्कमा रहेको पानी मेरुदण्डको तलसम्म पुगेको हुन्छ । त्यसैले मेरुदण्डको पानी निकालेर परीक्षण गरीएको हो । त्यो पानीलाई सेरेब्रो स्पाइनल फुलुड (सिएसएफ) भनिन्छ । व्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस्को उपचारका लागि बिशेष प्रकारको एन्टिवायोटिक हुन्छ । यो औषधि अस्पताल भर्ना भएर कम्तीमा पनि १४ दिनसम्म नियमित रुपमा नशामा सुई लगाउनु पर्छ । भाइरल मेनिन्जाइटिस्को कुनै पनि औषधि हुँदैन । यसका लागि सर्पोटिभ उपचार मात्र गरिन्छ । यसमा आइसियु केयर र पोषण दिएर उपचार गरिन्छ ।
प्यारासाइटिक र फङगस मेनिन्जाइटिस् छ भने त्यसै अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । क्यान्सरबाट हुने मेनिन्जाइटिस् सबैभन्दा जटिल किसिमको हुन्छ, जसको ठोस उपचार नै हँुदैन । मेनिन्जाइटिस् कहिलेकाहिँ दोहोरिन पनि सक्छ । मेनिन्जाइटिस् एक प्रकारको सरुवा रोग हो । व्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस्को लागि खानपान राम्रो हुनुपर्छ । बस्ने वातावरण र घरसमेत सफा हुनुपर्छ । सुँगुर पाल्ने ठाउँमा मेनिन्जाइटिस् धेरै देखिने गरेको छ ।
त्यसैले वातावरण सफा सुग्घर राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनिएको हो । कहिलेकाहिँ टाउकोमा चोट लाग्दा नाकबाट पानी बगिरहेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सयमै उपचार गरिएन भने पनि मेनिन्जाइटिस् हुनसक्छ । किनभने नाकबाट आएको पानी सिधै ब्रेनबाट आएको हुन्छ । ठूलो व्यक्तिमा भन्दा बच्चाहरुमा व्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस् धेरै देखिने गर्छ । यसको प्रमुख कारण बच्चामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी हुनुले हो । सानोमा बच्चा धेरै रुने, घाँटी बांगो पार्ने, ज्वरो आउने, दूध नखाने, धेरै वान्ता गरेमा मेनिन्जाइटिस् हुनसक्छ । यस्तो समस्या देखिएमा तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्छ ।